Olee otú iji tọghata ASF ka DVD ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata ASF ka DVD
ASF bụ a multimedia usoro maka ngbanwe na ikesa dijitalụ videos. ASF faịlụ pụrụ n'ụzọ dị mfe na-egwuri na media Player dị ka Windows Media Player, na kwa pụrụ n'ụzọ dị mfe ọkụ jidesie a mgbe DVD na enyemaka nke a ọkachamara ASF ka DVD Ntụgharị. Na-ere ọkụ ASF faịlụ ka DVD bụ oké echiche na-egwu ASF faịlụ na n'ụlọ DVD Player ma ọ bụ TV. Na ahịa ina bụ nnukwu.
Isiokwu a dị nnọọ ndị ahịa ina na-egosi na ị na ụmụ okorobịa Olee otú iji tọghata ASF ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ. Akpa, ị chọrọ ka ibudata ma wụnye a ọkachamara na mfe na-eji ASF ka DVD burner - Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac). Ọ pụrụ inyere gị ọkụ a ọkachamara-na-achọ DVD si gị ASF faịlụ a na nkeji ole na ole. Ugbu a, dị nnọọ eso nkuzi ike a oké masterpiece.
1 mbubata gị ASF videos n'ime nke a ngwa
Lauch uku a ASF ka DVD Ntụgharị, na-amalite importing gị ASF faịlụ a usoro. Ime ya, i nwere atọ doable ụzọ ịhọrọ site na:
Na a na ngwa ekpe ebi ndụ, ị dị nnọọ see "+ Import" button aka ịchọta ndị ASF faịlụ na ị chọrọ na mbubata ha.
Bugharịa ihe òké na-acha anụnụ anụnụ gburugburu bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a window ka pịa ya, na mgbe ahụ họrọ "Tinye Files ..." nhọrọ.
Mgbe ị na-emeghe na nchekwa na e dere mpaghara gị ASF faịlụ, ị dị nnọọ kpọmkwem ịdọrọ ASF faịlụ na ị chọrọ a usoro ekpe ebi ndụ.
1. Kpatụ video usoro a na-eji ngwa ekpe ebi ndụ dị ka play iji. Ime ya, ị ma ikpuru & dobe a faịlụ ka ebe ị chọrọ ma ọ bụ pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window.
2. Iji jikwaa gị videos mma, ị nwere ike ịhọrọ pịa "Tinye aha" button ịgbakwunye ihe ọhụrụ utu aha.
3. Pịa Dezie nhọrọ na otu nke video item Ogwe aka ịgbanwe video ìhè / iche / saturation / olu, ịkpụ, akuku, tinye dị iche iche mmetụta wdg
2 Mee a DVD menu na ịhụchalụ dum oru ngo
Mepee NchNhr window site na ịpị NchNhr taabụ, Bugharịa ihe mmịfe n'akụkụ aka nri iji chọta DVD menu template ị chọrọ. Mgbe ahụ, dị nnọọ pịa ya itinye na oru ngo, na mgbe ahụ hazie ya site na-agbakwụnye thumbnails, buttons, ederede, n'okirikiri / image wdg (Cheta: Ọ bụrụ na e nweghị DVD menu template ị chọrọ ịhọrọ, ị dị nnọọ see green ala aro icon iji nweta ihe free DVD menu ndebiri anyị akụ n'ọbá akwụkwọ.)
Ihuchalu finial utịp ke "Preview" window. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-adịghị na afọ ojuju na, dị nnọọ laghachi eme ya ọzọ.
3 Ọkụ ASF ka DVD
Mgbe ị fanye a ide DVD diski (Ma DVD5 na DVD9 dị), ị dị nnọọ see "Ọkụ" taabụ iji họrọ "Ọkụ ka diski" nhọrọ na pịa "Ọkụ" button ke "Ọkụ" windo. Ozugbo ahụ, a na ngwa ga-amalite ASF ka DVD na-enwu. (Cheta: Ọ bụrụ na ị na-adịghị ịzụta a ngwa, ọ ga-ọkụ DVD na a watermark.) Mgbe ọ mere, ị ga-enweta a writen DVD diski. Dị nnọọ nwere a fun!
Cheta na: e were ya na size dum ngo bụ karịa nchekwa ikike nke a DVD 5, ma ị na-enweghị a DVD9. Ke ikpe dị ka nke a, ị dị nnọọ fanye DVD5, n'ihi na a ngwa ga-mpikota onu ya aka dabara DVD disck.
Olee otú iji tọghata ASF ka AVI na Windows / Mac
Olee otú iji tọghata MXF ka DVD
iDVD nkuzi: Olee otú iji iDVD
Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ MP4? Ngwọta
Olee otú iji tọghata / Ọkụ TS ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)